साहित्य – Page2– गाउँपालिका
‘बाल–सौगात’ बाट अग्रजले पाएको पृष्ठपोषण
नन्दलाल आचार्य सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गामा जन्मे–हुर्केका सर्जक इन्द्रकुमार श्रेष्ठ जीविकोपार्जनको पेशा शिक्षण हो । जनसेवामा दक्ष बन्ने क्रममा बालबालिकाको संसारको अध्ययन गर्न पुगे । अनुभवले खारिएको व्यक्तित्व विकास गर्दै गए । पटक–पटक राजधानीमा समेत छिरेर शैक्षिक जगत्को अध्ययनमा समय व्यतित गरे । विविध ठाउँका शैक्षिक क्षेत्रका सूक्ष्म कुराहरूको जानिफकार बने । राजनीतिका नाममा देश ठगिएको भे...
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली भाषा–साहित्यसेवी कमलमणि दीक्षितको ८६ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ ।श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित उनको ललितपुरको बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा बिहान दुई बजेर ४५ मिनेटमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । तीन महिनायता फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित उनलाई गाह्रो भएपछि गत सोमबार अस्पताल लगिएको थियो । मदन पुरस्कार गुठीले शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै ...
‘‘तपाईं के लिने खाजामा ?” भर्खरै वेटरले छोडेर गएको मेनु हेर्दै उसले मलाई सोधी । ‘‘खै खाजा त केही नखाऊँ होला, आज खाना नै ढिलो खाइयो ।” उसको प्रश्नको उत्तर उसलाई हेर्दै दिएँ । मेरो उत्तरको पर्खाइमा उ मेरै अनुहारतिर सोझिएकी थिई । ‘‘कफी लिने त ?” आँखा अलि चञ्चल पार्दै उसले सोधी । मैले टाउको हल्लाएँ । ऊ ब्यागबाट पर्स झिकेर भित्र काउन्टरतिर लागी । हट चिल्ली क्याफे काठ्माडौं मलको दोस्रो तल्लामा ...
दीपक घिमिरे ‘कहानी घर–घर कि’ हिन्दी च्यानलबाट प्रसारित हुने यो सिरियल त्यो बेला खुबै हेर्थें । बुझेर त हैन, नबुझेरै सेन्टी भइन्थ्यो । कलाकारहरुको पीडामा आँसु खस्लाझैं भएर आँखा रसाउँथे । अनि उनीहरुको खुशीमा आफै ओठसम्म मुस्कान आइपुग्थ्यो । ठ्याक्कै त्यस्तै घरघर कि कहानी बन्छ आजभोलि हाम्रो समाजमा । तर कसैलाई कसैको मतलब छैन । पल्लो घरमा भैंसी ब्याउँदा सबै टोलवासी खुशीले रमाउने समाज हो हाम्रो ...
गीत – “सक्दो माँया त दिएकै थिँए”
बाबुराम पन्थी राख्न खोजेर पनी तिम्रो मन कहाँ पो राख्न सक्छु र म । पापी, बैमनस्य मन विच निस्वार्थ मन काँहा भेट्न सक्छु म ।चाहेर पनी त आफ्नै अस्तु चढाउन तिमी लाई सक्दिन म । सायद त्यही कारणले तिम्रो दिलमा अटाउन सक्दिन म । सक्दो माँया त दिएकै थिँए एकै थोपा बाँकी नराखी । खै के ठान्यौ एकाएक तिमीले जाई लाग्यौ आज म माथी । चाहेर पनी त आफ्नै अस्तु चढाउन तिमी लाई सक्दिन म । सायद त्यही कारणले...
बाबुराम पन्थी कतिन्जेल बस्छौ एक्लै एक्लै घरमै फर्क साथी लालाबालासँग बेग्लै बेग्लै घरमै फर्क साथी पाखुरीमा बल छँदा विदेशमा जीवन खेर नफाल गरौंला केही धन्दा स्वदेशमा घरमै फर्क साथी बाबा आमा रून्छन् सधैँ सम्झेर तिमीलाई हरपल पर्खिराख्या छिन् उनी यौवन साँचेर घरमै फर्क साथी हेपिएर परदेशमा नोकर बन्न अब छाडी देऊ भो उत्तम कुटीकै मालिक बन्न घरमै फर्क साथी कतिन्जेल बस्छौ एक्लै एक्लै घर ...
यो मासिन्या खलकको छोरो कहाँबाट आयो अरे के के गर्यो यसले पूरै झिलिमिली छायो ? कुनै छट्टू मानिसले देख्यो जव लाज मान्यो भन्यो-“हैन विचराले मात्र स्वीच दवायो “ ! जव बत्ती निभ्न छाड्यो जादू लाग्न थाल्यो प्रश्न उठ्यो – हिजो अस्ति बत्ती कसले खायो जस्ता पाता सिमेन्ट खाने मानिस त देखियो करेन्ट लाग्ने बिजुली त्यो केगरी पचायो ? जव यस्ता हराएका चिज फेला पर्न थाले लुकाउँने घरानामा ठूलै कोल...
कहिले वेगवान तूफानसित उडिरहेछ जीवन विश्राम छैन/विवेचना छैन कतै पुग्नुको हतारोमा निरन्तर बगिरहेछ जीवन +++++++++++++ कहिले आनन्द/कहिले उत्तेजना कहिले विषाद/कहिले संवेदनाको दहमा/निरन्तर डुब्दै उत्रिँदै कहिले तैरिँदै/कहिले तरङ्गिदै एकनाश बगिरहेछ जीवन ++++++++++++++ पहराबाट हामफाल्दै /झरेको नदी जस्तो एक रफ्तारमा/एक त्वरामा अविराम बगिरहेछ जीवन